र सल्लाह: म कसरी पूरा. बैठक मानिसहरू छौं गर्दा बाझिने र अलग्गै एक गम्भीर सम्बन्ध - समान वापस माग्नु संग नेटली लुइ
र सल्लाह: म कसरी पूरा. बैठक मानिसहरू छौं गर्दा बाझिने र अलग्गै एक गम्भीर सम्बन्ध — समान वापस माग्नु संग नेटली लुइ
हाल म भएको बारेमा केही शंका जहाँ मानिसहरू भेट्न छु किनभने थकित को क्लबहरू । सबै मान्छे त्यहाँ बस चाहनुहुन्छ एक रात अडान छ, र अधिकांश समय तिनीहरूले छौं प्रकारको मादक पदार्थ सेवन कि त सुन्दर छैन म अधिक चाहनुहुन्छ शायद एक गम्भीर सम्बन्ध तर एक मान्छे तपाईं गर्न सक्छन् मिति एक जोडी पटक र एक राम्रो समय छ संग म छैन साँच्चै पर्याप्त पुरानो बारी गर्न एक डेटिङ वेबसाइट र म एक्लो महसुस कारण एक मान्छे सही अब । भन्छन्: यो समस्या छ कि तपाईं मा हो, संघर्ष । तपाईं चाहनुहुन्छ भन्न पूरा गर्न मान्छे छैनन् बस प्राप्त गर्न प्रयास मा आफ्नो तुच्छ, एक गम्भीर सम्बन्ध, र आदर्श तपाईं चाहनुहुन्छ कसैले तपाईं जान सक्नुहुन्छ र छ को एक जोडी संग मिति छ । को शीर्ष मा, यो तपाईं चाहनुहुन्छ उहाँलाई एक मानिस जस्तै व्यवहार गर्ने मजा छ तर छैन पनि धेरै मजा छ । किन यो छ. तपाईं संघर्षरत छन् किनभने तपाईं चाहनुहुन्छ धेरै कुरा बाहिर कि तपाईं गर्न चाहनुहुन्छ सानो अधिक दुई मिति भन्दा बाहिर छ । डेटिङ गाह्रो छ, तर यसको गरे कठिन छ भन्ने तथ्यलाई द्वारा छन्, धेरै बाहिर त्यहाँ मानिसहरू डेटिङ गर्ने तिनीहरूले चाहनुहुन्छ के थाहा र बाझिने. यो पठाउँछ बाहिर मिश्रित सन्देशहरू र थप होइन्छ गर्न मान्छे को एक धेरै वरिपरि हिँडिरहेका जस्तै कुखुरा मा डेटिङ संसारमा । यो मौका दिन्छ कसैले चिन्न र नगर्ने निर्णय यसको कुरा तपाईं लिन चाहनुहुन्छ अर्को स्तर गर्न. त्यहाँ कुनै नियम छ कि भनेर भन्छन् मिति गम्भीर कुरा, तर, यो गर्छ बदल को के प्रकार डेटिङ अनुभव गर्न तपाईं हुनेछ. यस शीर्ष मा, तपाईं असावधान नेतृत्व केही मान्छे माथि बगैंचामा बाटो तपाईं छन् भने अस्पष्ट के तपाईं चाहनुहुन्छ. अर्को कुरा, तपाईंलाई थाहा छ, उहाँले सोच छ, तपाईं साँच्चै उहाँलाई जस्तै र तपाईं हुन सक्छ, विशेष केहि जबकि तपाईं गरेको छौं पछि दुई मिति. मानिसहरू एकदम शाब्दिक छ । यदि तपाईं वरिपरि बारी र चाहनुहुन्छ भन्न लिया गर्न बाहिर गर्न, एक जोडी को तिथिहरु, र मजा, तिनीहरूले तदनुसार. वरिपरि एक आधा सभ्य मान्छे, उहाँले बस भनेर तर वरिपरि को औसत मान्छे भनेर सुन्छ एक महिला भन्न त्यो बस चाहन्छ मजा, उहाँले भनेर सुन्न रूपमा त्यो लागि एक र मौका आफ्नो हात छ । भाग मलाई महसुस तापनि, यो कष्टप्रद छ जब मान्छे के गर्न लाग्न पत्ता चाहनुहुन्छ रंग को आफ्नो तुच्छ तिनीहरूले भन्दा बढी जान्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं सबै तपाईं चाहनुहुन्छ केहि मजा र एक जोडी को मिति, यी वास्तवमा शायद आफ्नो आदर्श उम्मेदवार छ । को राशि तपाईं मा राखे पा पुरुष हुनुपर्छ आनुपातिक प्रकार को डेटिङ अनुभव गर्न चाहनुहुन्छ. यदि सबै तपाईं साँच्चै चाहनुहुन्छ केहि मजा को एक जोडी मा मिति, जान बदल शहर तलमाथि लागि देख संभावित केटा. म चाहन्छु ले आफ्नो संभावना संग मान्छे तपाईं भेट्न बाहिर सामाजिक छ । तर तपाईं निर्णय गर्न आवश्यक के तपाईं चाहनुहुन्छ.
बाहिर जान, आफैलाई आनन्द, र बस को हुन जा देखि एक केटी बारेमा शहर मा आनन्दित आफु र अलग्गै गम्भीर कुरा गर्न, एक केटी बारेमा शहर छ जो अलग्गै प्रतिबद्धता छ । यो सबै समय हुन्छ र तपाईं गर्न सक्छन् फस्न केही साँच्चै खराब प्रेम बानी जब सम्म तपाईं नजिक ध्यान गर्न कसरी तपाईं व्यवस्थापन आफ्नो एकल जीवन र कति तपाईं आफैलाई गरौं आकर्षित वा प्रभावित मान्छे तपाईं पूरा । ठाउँ छैन सधैं एक विचार को मान्छे को प्रकार तपाईं पूरा हुनेछ, तर एक औंठी को नियम, प्रकार जस्तै मानिसहरू तपाईं पुन बैठक मा ठाउँमा जहाँ तपाईं जान, परिवर्तन ठाउँमा छ । जोगिन प्रयास पूरा गर्न मानिसहरू मा काम किनभने म पर्याप्त अनुभव छ आफैलाई र अन्य पाठकहरूलाई थाहा, कि तपाईं साँच्चै गर्नुपर्छ पिशाब मा आफ्नो दरवाजे. गति डेटिङ र एकल कार्य मजा छन् र तपाईं दिन सक्छ एक छिटो तय पुरुष ध्यान । सावधान हुन लाग्यो रही एक लीक मा यी रूपमा बनाउन सक्छ तिनीहरूले तपाईं कचकच र वा प्राप्त तपाईं अंकुशाकार सङ्कलन मा ध्यान । बैठक मार्फत मानिसहरूलाई सोख र गतिविधिलाई छ सधैं राम्रो एक हुनेछ रूपमा तपाईं पहिले नै शेयर साधारण जमीन, तर यो छ अधिक महत्त्वपूर्ण छौं जब लागि देख एक संभावित साथी । कला दीर्घाओं, मेहतर शिकार, रक्सी टेस्टिङ, एक साँझ पाठ्यक्रम, जिम (हुनत यो सम्झना हुन सक्छ अजीब पछि), पसलहरु (हेर्न असहाय संग एक वा केहि मा एक डिब्बामा छन् जहाँ धेरै मानिसहरू वरिपरि हिँडिरहेका), उधारो एक कुकुर एक र एक पैदल लागि जाने, पार्क मा वा खेल. म एक ठूलो प्रशंसक छैन हुँ अनलाइन डेटिङ को उमेर बस भन्ने तथ्यलाई लागि यो छ अधिक फटाहा र पुरुष नाटक छौं एकल जब तिनीहरूले साँच्चै एक प्रेमिका वा पत्नी, संचालन मा भन्ने निर्देशन छ । यो तपाईं को लागि आदर्श गरिरहेको छ ती खाने मिति कुराहरू राम्रो खाना, रक्सी, र मान्छे को एक समूह गर्न संभावना छन् जो जेल संग आफ्नो व्यक्तित्व ।. मेरो सल्लाह यद्यपि तपाईं छ के बाहिर आंकडा गर्न चाहनुहुन्छ. आशा तदनुसार किनभने यदि तपाईं चाहनुहुन्छ के मजा छ, त्यसपछि, बारे चिंता के यी मान्छे देखि चाहनुहुन्छ तपाईं को एक बेकारी छ ऊर्जा. बस किनभने एक केटा चाहनुहुन्छ एक-रात अडान, उहाँले हुन्छ । बाहिर जानुहोस् र मजा र को सावधान हुन राखेका मानिसहरू जस्तै व्यवहार गर्न संभावित प्रेमी जब तिनीहरूले हुन असम्भाव्य छौं वरिपरि परे तेस्रो.
म देख्न सक्छौं जहाँ लेखक देखि आउँदै छ
सामान्यतया जब तपाईं पुन एकल, खर्च गर्न चाहनुहुन्छ शनिवार रात घर मा एक्लै, र चाहनुहुन्छ केही सामाजिक बातचीत र सामान्यतया, यसको ठाउँमा जस्तै क्लबहरू जहाँ तपाईं जाने । तिनीहरूले खेल्न राम्रो संगीत र राम्रो सेटिङ, तर म अनुमान कुञ्जी कुरा छैन आशा पूरा गर्न आफ्नो आदर्श साथी त्यहाँ, तर बस आराम गर्न छ, एक राम्रो समय मित्र संग, र तपाईं के भने कसैले पूरा, रोचक, राम्रो छ कि सिर्फ एक बोनस छ. मेरो अनुभव मा, म अझै पूरा गर्न कसैलाई साँच्चै शानदार, तर म थियो मित्र भेट गर्ने आफ्नो साझेदार मा खाना र संगीत चाडहरूमा छ । त्यो एक साँच्चै रोचक विषय छन् । म किन नम्बर एक कारण छ. हामी समस्या भेट्टाउने राम्रो मान्छे तारीख गर्न वा एक्लै गरौं रही मिति छ किनभने हामी ध्यान पनि धेरै समय र ध्यान. यो लगभग जस्तै र मान्छे महसुस गर्न सक्छन्, यो एक माइल टाढा छ । कति पटक हामी सुनेका कथाहरू को मान्छे खोजन ठूलो साझेदार तिनीहरूले थिए जब, कम से कम यो आषा? धेरै दम्पतीले सँगै मिल्यो, तिनीहरूले थिए जब बन्द विपरीत सेक्स । मलाई लाग्छ कि सबै भन्दा राम्रो कुरा गर्न के गर्दै छन् जब तपाईं एक ध्यान छ आफैलाई । किन बाहिर आंकडा आफ्नो अन्तिम जोडी को सम्बन्ध असफल भयो र के तपाईं सिक्न सक्छ त्यहाँ.
बाहिर त्यहाँ जान र रमाइलो
र एक पल्ट लागि आनन्द हो भन्ने तथ्यलाई एक छ । म हामी हुनेछ लाग्छ खर्च धेरै दिन विवाह भन्दा हामी एकल । त्यसैले, हामी हुन सक्छ रूपमा राम्रो तिनीहरूलाई आनन्द जबकि हामी गर्न सक्छन्. को मामला मा डेटिङ मान्छे भए तापनि, म भन्न हुनेछ तपाईं आवश्यक छ के थाहा विशेषताहरु तपाईं को लागि देख रहे मा एक मान्छे रूपमा एक सामान्य दिशानिर्देश हो । म छु छैन भन्दै एक विशाल सूची तर सोचिरहेका छन् भन्ने कुरा बिल्कुल कुनै बेचन । त्यो बाटो, तपाईं के थाहा तपाईं को लागि देख रहे र गर्न सक्षम छन् मिति धेरै अधिक उपयुक्त पुरुष. यो पनि मा ध्यान गर्न अनुमति दिन्छ भइरहेको छ कि व्यक्ति को प्रकार आफ्नो आदर्श जोडीलाई आकर्षित हुनेछ । त्यसैले, उदाहरणका लागि, वफादार थियो, रोगी र दयालु त्यसपछि तपाईं हुनेछ गर्न ध्यान केन्द्रित भएर बढी भनेर आफैलाई । ठीक छ म एउटा प्रश्न छ । थिएन साँच्चै पक्का जहाँ वा के यो हुन सम्बन्धित तर जे भए पनि यो महान मित्र, जो सिर्फ प्रेम, मलाई प्रेम मेरो बच्चाहरु, केहि थियो मेरो लागि. उहाँले एक ठूलो केटा, राम्रो काम, हास्यास्पद, दयालु, ठूलो परिवार मानिस, हामी यस्तो राम्रो समय वरिपरि प्रत्येक अन्य, भूमिका मोडेल, र पति, तर उहाँले एक बिट अधिक वजन, यौन आकर्षित गर्न उहाँलाई । म गर्न घृणा पनि भन्न किनभने म महसुस भनेर आफ्नो खोक्रो तर गरेको यो सामना गरौं भन्दा महिला गर्न चाहनुहुन्छ छ कि आकर्षण अघि केहि छ । म दिनांक को गलत प्रकारको मानिस, मेरो सारा जीवन, छ देखि बच्चाहरु को गलत प्रकारको मानिस । म छैन बाँच्न जारी राख्न चाहनुहुन्छ, मेरो जीवन एक्लै । हाल एक तर निर्णय गर्न प्रयास गर्न के छ । म छु छैन प्राप्त गर्न देख मा एक सम्बन्ध अहिले मेरो मित्र, तर मलाई के थाहा छ भने म कहिल्यै गर्न चाहन्थे मलाई सक्छ. म बस जान्न चाहनुहुन्छ भने कसैले सोच्छ कि तपाईं बन्न सक्छ अधिक आकर्षित गर्न एक व्यक्ति जो किनभने तिनीहरूले समय छ । म अचम्म लाग्छ कि एक लामो समय को लागि छ । प्राप्त गर्न प्रत्येक अन्य देख्न, धेरै त म के आश्चर्य थिए भने यो एक दैनिक आधार मा यदि यो विभिन्न हुनेछ, तर यति निश्चित छ । शारीरिक आकर्षण, एक सम्झौता बार्कर. धन्यवाद, धन्यवाद, लागि उल्लेख आफ्नो ब्लग मा यो बाहिर प्राप्त गर्न कठिन त्यहाँ छ तर मान्छे को बैठक र सक्रिय जा मिति मा काम गर्छ अन्ततः छ । एक बस गर्न छ राख्न प्रयास
← नयाँ सरल डेटिङ अनुप्रयोग चीन मा मुक्त र सजिलो
शीर्ष देशका लागि एकल एशियाली मान्छे पूरा गर्न तातो बालिका →
© 2020 भिडियो च्याट चीन